निर्मला प्रकरण : के एसपी विष्ट पदमा फर्किन सम्भव छ? « AayoMail
निर्मला प्रकरण : के एसपी विष्ट पदमा फर्किन सम्भव छ?
कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्या प्रकरण मुद्दा परेपछि बर्खास्तमा परेका प्रहरी उपरीक्षक दिल्लीराज विष्टलाई पुनर्बहालीको बाटो खुलेको छ।
जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले बिहीबार बर्खास्तमा परेका विष्टसहित निलम्बन गरिएका सबै प्रहरीहरूलाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो।
यो फैसलासँगै विष्टले अब पुनर्बहालीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निवेदन दिन सक्छन्। तर, उनी यो प्रक्रियामा जालान् नजालान् भन्ने चाहिँ उनैमा निर्भर रहन्छ।
फैसलामा बर्खास्तमा परेका प्रहरीलाई कस्तो किसिमको न्याय दिने भन्ने उल्लेख भने नभएको श्रेष्तेदार यदुनाथ शर्माले बताए। ‘के कस्तो क्षतिपूर्ति दिने वा पुनर्बहाली हुने भन्ने फैसलामा उल्लेख छैन,’ शर्माले भने, ‘सबै प्रहरीलाई सफाइ दिने फैसला भएको छ।’
फौजदारी न्याय प्रणालीमा सफाइ पाउनु कसुर स्थापित नभएको ठानिने हुनाले स्वत: न्यायका लागि अपिल गर्न सकिन्छ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतका अनुसार अब विष्टले प्रहरी प्रधान कार्यालयको कानुन शाखामा निवेदन दिन सक्छन्। कानुन शाखाले लेखापढी सुरू गरेर गृह मन्त्रालयलाई बर्खास्त फुकुवाको पहल गर्न सक्छ।
‘गृह मन्त्रालयले अनुमति दिए बर्खास्त फुकुवा भएर पुन: पदमा फर्किन सकिन्छ,’ कडायतले भने।
श्रेस्तेदार शर्माका अनुसार सामाजिक न्याय र यातना कसुरमा जम्मा आठ जना प्रहरीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।
तीमध्ये प्रहरीहरूमा विष्ट, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का डिएसपी अंगुर जिसी, डिएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, इन्स्पेक्टर एकेन्द्रबहादुर खड्का, इन्स्पेक्टर जगदिशप्रसाद भट्ट, सई हरसिंह धामी, सई रामसिंह धामी र जवान चाँदनी साउदलाई प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो।
अन्य निलम्बनमा परे पनि विष्ट र प्रहरी निरीक्षक भट्टलाई प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा गृहले बर्खास्त गरेको थियो।
विष्ट र भट्टलाई २०७५ भदौ ३१ गते निलम्बन गरिएको थियो। त्यसको एक महिनापछि असोज २९ गते प्रधान कार्यालयले विष्ट र भट्टलाई बर्खास्त गर्न गृहमा चिठी लेखेको थियो।
सोही चिठीका आधारमा गृहले २०७५ कात्तिक ८ गते विष्ट र भट्टलाई बर्खास्त गरेको थियो।
२०७५ साउन ११ गते बिहान पन्तको शव बलात्कारपछि हत्या गरेको अवस्थामा कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका-१८ को उखुबारीमा फेला परेको थियो। उक्त बलात्कार-हत्याका वास्तविक दोषी अहिलेसम्म पनि पत्ता लागेका छैनन्।
प्रहरीले उक्त घटनामा गम्भीर लापरबाही गरेको, प्रमाण नष्ट गरेको र यातना दिएको तथा त्यसबेला विष्ट र भट्ट कञ्चनपुरमा कार्यरत् रहँदा सो लापरबाही भएको भन्दै उनीहरूलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरिएको थियो।
‘अदालतले निर्णय गरेपछिको कानुनी प्रक्रिया पुनर्बहालीका लागि निवेदन दिने नै हो। बाँकी बर्खास्त गर्ने र नियुक्ति दिने निकाय के निर्णय गर्छन् भन्ने हो,’ कानुन शाखामा लामो समय काम गरेका पूर्वप्रहरी उपरीक्षक रविन्द्रनाथ रेग्मीले भने, ‘तर, अदालतको निर्णय मान्नुपर्छ।’
यस्तो थियो गृहको बस्खास्त पत्र